धुम्रपान गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् धुम्रपानबाट टाढा राख्ने १० प्राकृतिक उपाय - Khabar Break
धुम्रपान गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् धुम्रपानबाट टाढा राख्ने १० प्राकृतिक उपाय
१. बिस्तारै कम गर्नुहोस्ः
२. धुँवाबाट टाढा रहुनहोस्ः
३. आफ्नो मुखलाई व्यस्त राख्नुहोस्ः
४. पहिला जाने ठाउँमा जान बन्द गर्नुहोस्ः
५. संगीत सुन्नुहोस्ः
६. स्वच्छ हावाः
आफ्नो घरलाई चुरोटको धुँवाबाट मुक्त गर्नुहोस् । कोठाको झ्यालहरु धेरैजसो खुल्ला राख्नुहोस् ता कि तपाईंको कोठामा स्वच्छ हावा आवतजावत होस् ।
७. आफ्नो दिनचर्यालाई परिवर्तन गर्नुहोस्ः
८. धुम्रपानलाई याद दिलाउने सामानहरु फ्याँकिदिनुहोस्ः
९. खाली समयमा सिगरेट नपिउनुहोस्ः
१०. खाली समयमा अन्य कामः
खाली समयमा गर्ने कामहरुको सूची तयार गर्नुहोस् जस्तै कतै घुम्न निस्कनुहोस्, पानी पिउनुहोस् अथवा आफ्नो कुकुरसँग खेल्नुहोस् ।
वास्तुशास्त्र अनुसार बिहान उठेपछि के गर्ने के नगर्ने ?
एक हजार गर्लफ्रेण्ड भएका व्यक्तिलाई यौन अपराधको अभियोग, एक हजार ७५ वर्ष जेल सजाय
चाणक्य नीतिका अनुसार यदि तपाईसँग यी ३ कुरा छन् भने धर्तीमै छ तपाईलाई स्वर्ग !
महिलालाई मन नपर्ने पुरुषका यि चार बानी
पुरुषहरु महिलाका यी ७ कुराहरुमा आकर्षित हुन्छन्